Mbelata nke ahịa crypto na-eduga na ọdịda nke NFT - CoinWorldMap
Mee 14, 2022 Ethereum, Nft
Ihe omume na-adịbeghị anya nke ahịa crypto na-eme ka e nwee obi abụọ na ole NFT na-adabere na mgbanwe nke ahịa cryptocurrency. Site na ọnụ ahịa ETH dị ala, ọnụ ahịa ala nke NFT blue chip collection na-agbadata. Ọnụ ahịa azụmaahịa NFT dakwara n'ọkwa ha kacha ala kwa ọnwa.
Mbelata nke ugbu a nke cryptocurrencies na-eduga n'ịbelata ọnụ ahịa ọnụ ahịa n'ofe bọọdụ, yana ọdịda nke uru cryptocurrencies n'ime izu ole na ole gara aga, yabụ, Nft na okwu dollar.
Ethereum (ETH), onye isi ahịa NFT, na-ere ahịa gburugburu $ 2000 na oge akuko, site na $ 2800 otu izu gara aga. Terra's stablecoin, TerraUSD (UST), na akara ala ya LUNA adaala n'ụbọchị ndị na-adịbeghị anya, na-efunahụ ihe karịrị 99%.
Ọ bụ ezie na UST si na dollar US pụọ na otu-na-otu wee na-ere ya na $0,013, LUNA gbara gburugburu $0,0000914 n'ehihie Fraịde. Ka ọ dị ugbu a, NFT wuru na Terra biputere ọkwa ndekọ nke ọrụ azụmaahịa na Mee 11, nke agbadala kemgbe.
N'aka nke ọzọ, ọnụ ahịa Ether dị ala emeela ka ọnụ ahịa ala ETH NFT dị ogologo na-adaba na ụgwọ gas dị ala (nke azụmahịa ike na Ethereum blockchain).
Ọrụ mgbawa na-acha anụnụ anụnụ dị ka Bored Ape Yacht Club (BAYC) na CryptoPunks abụghị ihe ọzọ. Azụmahịa na mkpokọta Bored Ape Yacht Club na OpenSea dara n'ọkwa kachasị ala n'ime ihe karịrị otu ọnwa, gbadara 63% na Mee 12 n'ime ụbọchị asaa.
Ọ bụ ezie na ọnụ ahịa ahịa kwa ụbọchị sitere na NFT asatọ ruo 67 NFT n'ụbọchị ọ bụla kemgbe mbido Mee, ọnụ ahịa ala nnakọta ahụ adaala nke ọma. Ọ gbadara na 12 ETH ($ 89) na Mee 169 wee laghachi na 792 eth na Fraịde ka ahịa gosipụtara akara nkwụsi ike. Opekempe Ọnụ ego BAYC elu na 152 ETH ma ọ fọrọ nke nta ka ọ daa netwọk Ethereum n'abalị nke Yuga Labs' Mpụta mbụ maka mkpokọta ndị ọzọ na mbido May.
NFT ndị ọzọ, chọrọ ịzụta ala na mpaghara ọzọ metaverse, na-anọgide na nchịkọta 10 kachasị elu nwere oke azụmaahịa kachasị elu kemgbe mpụta mbụ ha na OpenSea. N'akụkụ a, ọ dabara na mkpokọta ndị ọzọ sitere na ụlọ ọrụ nne na nna ya dị ka BAYC na Mutant Ape Yacht Club.
Dabere na NFTGo, olu azụmahịa nke ndị ọzọ adalatala kemgbe mmalite, site na nde $375 ruo nde $6,5. Agbanyeghị, mkpokọta ahụ ejidela ụfọdụ NFT kachasị ọnụ n'izu a, ka NonFungible.com siri kwuo. Ndị ọzọ maka ndị ọzọ #59906 rere maka 625 ETH, ya na $1,6 nde.
Nchịkọta NFT ndị ọzọ na-aga n'ihu na chaatị ndị a n'izu gara aga gụnyere Art Blocks, Doodles, Moonbirds, na nchịkọta Azuki na Beanz, ọbụlagodi mgbe ekpughere onye guzobere ha, na ọ bụ akụkụ nke ọrụ atọ gara aga dara ada NFT. Ọnọdụ ahịa akpaliwokwa ụfọdụ ndị na-etinye ego NFT ka ha nwaa imebi ihe ha nwere n'agbanyeghị nnukwu mfu.